အကြောင်းကိုယ်ဝန် Kristin Dunst မီဒီယာအောက်တိုဘာလအတွင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည်သူ့ကိုယ်သူယင်း၏စိတ်ဝင်စားဖို့အနေအထားနှင့်သူမ၏ရည်းစားယေရှဲ Plemons နှင့်အတူမင်္ဂလာဆောင်မှအကြောင်း, အသံတိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ado မရှိဘဲအားလုံးကအတည်ပြုမင်းသမီး၏မကြာမီကဓာတ်ပုံများ။
ကြာသပတေးနေ့တွင် paparazzi Los Angeles မှာသူမ၏နေအိမ်အနီးတွင် 35 နှစ်အရွယ် Kristin Dunst ဖမ်းမိ။ လာမည့်နှစ်တွင်ကလေးသူမ၏သတို့သားလောင်းကနေ 29 နှစ်အရွယ်မင်းသားယေရှဲ Plemons မျှော်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအကြိမ် mom, ဖြစ်ရလိမ့်မည်သူအများတို့သည်မီဒီယာများဟုပြောသကဲ့သို့, မင်းသမီး, ဖြည်းဖြည်းတစ်လန်းဆန်းပျစ်ရည်နှင့်ခွက်ကိုကိုင်ပြီး, လမ်းပေါ်မှာချသွားလာ၏။
Los Angeles မှာ Kristin Dunst
Light ကမီးခိုးရောင်အခမဲ့ Mini-စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်တစ်သွယ်ကြယ်ပွင့်များ၏ကိန်းဂဏန်းအတွက်သိသာပြောင်းလဲမှုဖုံးကွယ်နိုင်ခြင်းသူစတိုင်လေးကို Dunst, လုပ်အနက်ရောင်ဒီလိုပါပဲတင်းကျပ်စွာနဲ့တရားစွဲခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်နဲ့ပေါင်းစပ် unbuttoned အနက်ရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီ။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကထိတွေ့ဆက်ဆံမှု Dunst နှင့် Plemons အကြောင်းကိုလူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်။ လက်နှလုံးသားများခရစ္စသောနေ့၌ "ရွှေကမ္ဘာလုံး 2017" ၏အခမ်းအနားလက်ခံရရှိကိုဆက်ကပ်။ ကိုယ်ဝန်မီ, မင်းသမီး 2018 ၏နွေရာသီအတွက်အခမ်းအနားစီစဉ်ဖို့ချစ်ကြလိမ့်မည်, သို့သော်မကြာခင်မိဘအစီအစဉ်များကိုထိန်းညှိဖို့သူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏။ အတွင်းစုံတွဲကလေးရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများ၏စက်ဝိုင်းထဲမှာအခမ်းအနားအတွက်ပြင်ဆင်နေမှာပြီးသားခဲယဉ်းမွေးဖွားမတိုင်မီလက်ထပ်ဖို့လိုလားကြောင်းသတင်းပို့သည်။
နိုဝင်ဘာလအတွက် Kirsten Dunst နှင့်ယေရှဲ Plemons
Kirsten Dunst နှင့်သူမ၏စေ့စပ်ယေရှဲ Plemons ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မိဘများဖြစ်လာခဲ့သည်
အဘယ်သူ၏ရင်းနှီးသောဓာတ်ပုံများဟက်ကာများ 10+ ကြယ်က်ဘ်ပေါ် posted နှင့်လောကဓာတ်လုံးကိုအဘို့ထိုသူတို့ရှက်ကြောက်ခြင်း,
Kirsten Dunst တင်းကျပ်စွာဝတ်ဆင်ရန်မေ့?
ဒါကြောင့်သောကြာနေ့မှာ, သတို့သမီးနှင့်သတို့သားကို Beverly Hills မှာရှိတဲ့ယေရှဲသည်မိဘများကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။ သူတို့စည်းရုံးရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့သှားစားသောက်ဆိုင်များ၏တဦးတည်းအတွက်တစ်မိသားစုညစာစားပြီးနောက်။
Kirsten သတို့သားနှင့်အတူ Dunst နှင့် Beverly Hills မှာရှိသူ၏မိဘများ
Ivanka Trump အဆိုပါ G-20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏မူဘောင်အတွင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမိမိအဘကိုအစားထိုးထားပါတယ်ဘာကြောင့် Angela Merkel ကရှင်းပြခဲ့သည်
နှင်းဆီ McGowan နှောင့်ယှက်ဆန့်ကျင်ထွက်စကားပြောဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူကို Meryl Streep မှာထွက်တိုက်ခတ်ခဲ့
ယာရက် Padalecki မကြာမီတတိယအကြိမ်ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
Pamela Anderson ကတစ်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးကြော်ငြာအတွင်းခံအဝတ်အစားအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းပြသ
အစ်ကို Paul Walker
2016 ခုနှစ်တွင်ဘား Refaeli ပထမဦးဆုံးအကြိမ် mom, ဖွစျလိမျ့မညျ
Rihanna, George Clooney နှင့်အခြားနာမည်ကြီးတွေကသူ့အများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်အကွောငျးပွော
Britney Spears အခြားကလေးတစ်ရှိသည်နှင့်မီးဖွားခွင့်အပေါ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ပါ!
Romy Schneider နှင့် Alain Delon
Reese Witherspoon နှင့် "ဧည့်အဲလစ်" ၏ Premiere မှာသူမ၏သမီးအင်းဝ: တစ်ခွံနှစ်ခုပဲစေ့တွေဟာလိုပဲ
ဂျေမီ Dornan ဒါကိုတာဂျွန်ဆင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအကြောင်းကိုပြောပြသည်
အဆိုပါ ACC ယူနည်း
ကျစ် 2013 ခုနှစ်နယူးဆံပင်ပုံစံတွေ
အိုမင်းသောစိတ္တ - လက္ခဏာများ
Funchoza - စိတ်ဝင်စားဖို့ချက်ပြုတ်နည်းများဖန်ခေါက်ဆွဲ
ကလေးတစ်ဦး၏မစင်ထဲမှာ Iodophilic သစ်ပင်ပန်းမန်
ကလေးမွေးဖွားပေးခင်ကိုယ်ဝန်အတွက် Raspberry အရွက်
လူတ excite မှဘယ်လိုနေသလဲ?
မုန့်စိမ်း chebureks ဗော့ဒ်ကာ
ဆောင်းရာသီ cashmere ကုတ်အင်္ကျီ